फिजीमा बैंक खाता कसरी खोल्ने? - ALinks
के तपाई फिजीमा स्थानान्तरण गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ? प्रवासीहरूको बैंकिङ र लगानीको आवश्यकता फरक छ। यस लेखमा एक्स-प्याट बैंकिङ, फिजी बैंकिङ, र फिजीमा बैंक खाता खोल्ने बारे जानकारी छ।
फिजीको बैंकिङ प्रणाली अपेक्षाकृत सरल छ। धेरै बहुराष्ट्रिय बैंकहरूको देशमा कार्यालयहरू छन् र उनीहरूले पूर्व-प्याटहरूलाई उत्कृष्ट सेवाहरू प्रदान गर्ने सम्भावना छ।
प्रमुख सहर र पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा बैंकिङ सुविधाहरू प्रशस्त र उच्च गुणस्तरको भए तापनि बाहिरी टापुहरूमा यात्रा गर्दा तिनीहरू दुर्लभ हुन्छन् भन्ने कुरा विदेशीहरूलाई सजग हुनुपर्छ।
अपतटीय बैंकमा खाता खोल्नको लागि, तपाईंले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न पहिचानको प्रमाण र अन्य कागजातहरू प्रदान गर्नुपर्छ।
तपाईंसँग आवश्यक कागजातहरूको सूची लिएर नजिकैको बैंकमा जान सक्नुहुन्छ। वा तपाईंले पहिले कलमा भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफैलाई दर्ता गर्न अनलाइन सेवा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि, तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र कागजातहरू मात्र उपलब्ध गराउनु पर्छ र प्रमाणीकरण पछि, तपाईंको खाता सम्बन्धित बैंकमा खोलिनेछ।
बैंक खाता खोल्नको लागि के आवश्यकताहरू छन्?
हालको चालक अनुमतिपत्र
फिजी मतदाता परिचय पत्र
कृपया नोट गर्नुहोस् कि कर पहिचान नम्बर अनिवार्य छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पैसा स्थानान्तरण गर्ने उत्तम तरिका के हो?
विदेशमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सजिलो र सुविधाजनक विकल्प हो बुद्धिमानी। यो एक राम्रो र सस्तो अन्तर्राष्ट्रिय खाता हो। तपाईं पैसा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ वा परम्परागत बैंकहरूको तुलनामा सस्तोमा यो खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं विश्वभरि नि: शुल्क पनि पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई जहिले पनि वास्तविक विनिमय दर देख्न सक्नुहुनेछ। A बुद्धिमानी लुकेका शुल्कहरू छैनन्।
पैसा पठाउन वा प्राप्त गर्नका बारे बढि पढ्नुहोस् जहाँ तपाई बुद्धिमानीको साथ चाहानुहुन्छ।
पूर्व-प्याटहरूको लागि फिजीमा सर्वश्रेष्ठ बैंकहरू:
ANZ मा बैंक खाता खोल्नको लागि, तपाईंले तिनीहरूका कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईं केवल आफ्नो नजिकको ANZ शाखा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ वा आज 132 411 (स्थानीय) वा +679 321 3000 (अन्तर्राष्ट्रिय) मा कल गर्न सक्नुहुन्छ।
ANZ को साथ तपाईले बहु भुक्तानी प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
बढेको भुक्तान जो कोहीको सीमा
अरूलाई तपाईंको खाताहरू पहुँच गर्न अनुमति दिनुहोस्
वेस्टप्याक लाइभ मोबाइल बैंकिङमा दर्तामा ट्याप गरेर, तपाइँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो स्थानीय शाखा मा साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले 1300 655 505 मा फोन गरेर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ सिडनी समय बिहान 8 बजे देखि 8 बजे सम्म, हप्ताको सात दिन।
अज्ञात लेनदेनहरू पहिचान गर्नुहोस्।
कर र ब्याजको सारांश
आफ्नो हालको लेनदेन र ब्यालेन्स को प्रमाण डाउनलोड गर्नुहोस्।
अवधि निक्षेप व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
बन्द गरिएका खाताहरूलाई तिनीहरूको स्टेटमेन्ट मेल पठाइएको छ।
बैंक अफ बडोदा
तपाईं आफ्नो स्थानीय बैंक अफ बडोदा शाखामा जानुहोस् र खाता कसरी खोल्ने बारे सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले फारम भर्न आवश्यक छ। बैंक अधिकारीले 'नो योर कस्टमर (KYC) ढाँचामा आवश्यक जानकारी अनुरोध गर्नेछन्।
तपाईंले बनाउन सक्ने जम्मा संख्याको कुनै सीमा छैन।
न्यूनतम ब्यालेन्सको लागि कुनै आवश्यकता छैन।
त्यहाँ कुनै चेकबुक छैन।
ई-स्टेटमेन्ट नि:शुल्क सेवा हो।
त्यहाँ कुनै न्यूनतम वा अधिकतम अवधि छैन।
कागजमा निकासीहरू निःशुल्क छन्।
पासबुक निःशुल्क उपलब्ध छ।
फिजीमा बैंक खाता कसरी खोल्ने
पोर्चुगल मा बैंकहरु
नेपालमा शीर्ष banks बैंकहरू
अफगानिस्तानमा सर्वश्रेष्ठ बैंकहरू
भारत मा कदम बाट एक बैंक खाता कसरी खोल्न को लागी